window7အကြောင်းသိကောင်းစရာ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
window7အကြောင်းသိကောင်းစရာ
14-01-2009, 04:04 AM
window 7ဟု အမည်ရသည့် ကွန်ပျူတာစနစ်၏ Beta Version အား ဇန်န၀ါရီလ ၉ ရက်နေ့မှ စ၍ မိုက်ကရိုဆော့၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ တဆင့် အခမဲ့ Download ပေးထားပါတယ်။
To download 32 bit or 64 bit
ွှဘာကြောင့် window7ကိုထပ်မံထုတ်ရသလဲ?
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကနေ ၀င်းဒိုးဗစ်စတာကို ထုတ်ဝေခဲ့တာကြာပါပြီ။အခုအချိန်ထိ vista နဲ့ capability မဖြစ်တဲ့ software
တွေအများကြီးရှိနေခဲ့ပါတယ်။window vista ဟာ old version software တွေကို support လုပ်ခြင်းနည်းပါးလွန်းပါတယ်။
အဲဒီအချက်ကို window7မှာပြုပြင်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ချက်က
vista ထုတ်ဝေပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဝင်းဒိုးကို အသုံးပြုနှုံးဟာ Apple ကထုတ်တဲ့ Mac OS လောက်မရှိဘဲနဲ့ အသုံးပြုနှုံးကျဆင်းကာ ၀င်ငွေနည်းပါးခဲ့ပါတယ်။
ဒါတွေအတွက် Microsoft က window vista ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ window7ကို ထုတ်ဝေဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အများကသုံးသပ်ကြပါတယ်။
window7beta ကိုဘယ်သူတွေသုံးသင့်သလဲ?
-ကွန်ပြူတာ(window)နှင့်ပါတ်သတ်သော knowledge နည်းပါးသူများမသုံးသင့်ပါ။
လက်ရှိထွက်ပေါ်လာတဲ့ beta version က technical support လုံးဝပေးထားခြင်းမရှိပါ။
window7အသုံးပြုဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲ?
1 GHz processor and 1 GB of system memory လို့ဆိုထားပေမယ့် တကယ်အသုံးပြုမယ့်သူတွေဟာ2GB of system memory နဲ့
2 GHz processors ရှိမှသာ window7ရဲ့ the best performance ရရှိနိုင်မှာပါ။
Last edited by ဗေဒါလေး; 14-01-2009 at 04:28 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 56 ဦးတို့မှ ဗေဒါလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုတွတ်ပီ, ကိုဦး, ကိုဖြိုးငြိမ်း, ကိုသဝေထိုး, ချစ်စေသော်ဝ်, ဆန်းမောင်, ဇာနည်စိုး, တာတာ, နန်းနွယ်, နိုင်လင်းစိုး, နီထွန်းဦး, ဖယောင်း, မိုးကျော်ခမ်း, မိုးတိန်, မျိုးမင်းငယ်အောင်, ရန်မျိုးအောင်, လမင်းမျက်နှာ, သက်နိုင်, သက်ပိုင်ဦး, သူသူလေး, ဟန်မိုးလွင်, ဟိန်းသူအောင်, ဦးအောင်ထွန်း, ဧပရယ်မောင်ကြီး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, မောင်နေလင်းဇော်, မောင်ပေါ်ဦး, အေးချမ်းမောင်မောင်, ဖြိုးယံလေး, နိုးတူး, athaylay1, Aung Aung, azp09, bonge, cherry, crush, godoflove, jinfu, komyo2010, lamin.pzl, laylwintthu2599, Lwin Thu, maungwanna, minthumon, peacelover, phoelapyaee, rat, smlat88, Venom, venvimala, viva, whiteman, yemin7, zinnaing, zo
ပြန်စာ - window7အကြောင်းသိကောင်းစရာ
အခုကျွန်တော်သုံးနေလို့ လက်တွေ့ အခြေအနေကလေးကို ဆွေးနွေးလိုက်တာပါ။ window7ဟာ motherboad driver install လုပ်စရာမလိုပါဘူး။သူ့ကိုသုံးရတာကတော့ တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေပါတယ် ခင်မျာ။ ပေါ့ပါးမှုရှိပြီး function တွေလည်းတော်တော်စုံပါတယ်။ သုံးကြည့်ရင်တော့ကြိုက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ် ခင်မျာ။ အားလုံးကို ခင်မင်တတ်သူ တောသားလေး။.............
အင်း နောက်ထပ်တစ်ခုလည်း ရှိသေးတယ်ဗျ သူက driver CD ခွေများကို run မယ်ဆိုရင် သူ့ဆီကနေ ဒေါင်းလုပ်ချပြီး မှ run လို့ အဆင်ပြေပါမယ်ခင်မျာ။ ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံကလေးကိုပြောလိုက်တာပါခင်မျာ။လွဲနေ ရင်လည်း ပြင်ပေးကြပါခင်မျာ။ driver CD များတခြားနည်းနှင့်တင်လို့ရတာလေးတွေရှိ ရင်လည်းဆွေးနွေးပေးကြပါ ခင်မျာ။ ကျွန်တော်က အခုလက်တွေအခြေအနေလေးကို ဆွေးနွေးလိုက်တာပါ။ လိုအပ်တာများလည်းရှိနိုင်ပါတယ် ခင်မျာ။အားလုံးကို ခင်မင်တတ်သူ တောသားလေး။
Last edited by tu tu; 15-01-2009 at 07:52 PM.. Reason: ပို့စ်နှစ်ခုပေါင်း
အောက်ပါအသင်းဝင် 21 ဦးတို့မှ komyo2010 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, မိုးကျော်ခမ်း, မိုးတိန်, လမင်းမျက်နှာ, သူသူလေး, အာကာလေး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, မောင်နေလင်းဇော်, ယောနသန်, godoflove, jinfu, lamin.pzl, Lwin Thu, minthumon, peacelover, phoelapyaee, smlat88, tapaung, yemin7
အခု beta version ကိုတော့ကျနော်လည်းသုံးမကြည့်ရသေးပါဘူး။အရင် prebeta release တွေတုန်းကသုံးဖူးပါတယ်။အဲဒီတုန်းက
"This motherboard does not support"ဆိုတာပဲပေါ်လာတာ။bios ကို update လုပ်လိုက်မှပဲအဆင်ပြေသွားတယ်။အခု beta က
motherboard driver run ဖို့မလိုဘူးဆိုတော့ internet အတွက်ပါသူကပေးထားတာလား။အဲဒါလေးသိချင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ဗေဒါလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, ယောနသန်, jinfu
့ ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ သူက internet အတွက်ပါ တစ်ခါတည်းပေးထားပါတယ် ခင်မျာ။ကိုယ်သုံးမည့် ID နံပါတ်ကလေးရိုက်လိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါပြီခင်မျာ။ အားလုံးကို ခင်မင် တတ်သူ တောသားလေး...........
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ komyo2010 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အခုကျွန်တော် ဆွေးနွေးမည့် အကြောင်းအရာကလေးကတော့ windows7တွင်ပါဝင်သော calculator အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။windows7အမျိုးအစားလေးဟာ windows vista ထက် အတော်လေးကောင်းမွန် ပြီး ဒီဇိုင်းပိုင်းကအစ သာလွန်မှုရှိပါတယ်ခင်မျာ။windows7မှာပါဝင်တဲ့ calculator တွေကတော့ အမျိုးအစားအားဖြင့် ၄ မျိုးရှိပါတယ် ခင်မျာ။အဲဒီအမျိုးအစားများ ကို အောက်မှာ ပုံနှင့်တစ်ကွ ကျွန်တော်ရှင်းလင်းပေး ပါမယ် ခင်မျာ။
Programmer mode of Windows7Calculator
Statistics mode of Calculator
တို့ဖြစ်ကြပါတယ် ခင်မျာ။ရုံးတွေ စာရင်းအင်းလုပ်ဆောင်ရတဲ့ ဌာနတွေမှာ အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာကြောက့်လည်းဆိုတော့ သူ့မှာ ပါဝင်တဲ့ function ကတော်တော်လေးစုံလင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ နှစ်သက်သွားမလိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ အားလုံးကို ခင်မင်တတ်သူ တောသားလေး...........
Last edited by Aung Aung; 03-02-2009 at 03:41 AM.. Reason: editing invalid image links and adding reference
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ komyo2010 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဦး2012, ဖယောင်း, မိုးကျော်ခမ်း, သူသူလေး, မောင်သံသရာ, godoflove, jinfu, laylwintthu2599, Lwin Thu, minthumon, smlat88
အခုကျွန်တော် ဆွေးနွေးတင်ပြပေးမည့် အကြောင်းအရာကလေးကတော့ windows အတွက် အသုံးဝင်မည့် အခြေခံ အကြောင်းအရာ ဖြစ်တဲ့ အချက် (၃၀) ကို ဆွေးနွေးပေးပါမည်။ဒီအကြောင်းအရာကလေးကို လည်း ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားဖိုရမ်တစ်ခုမှတွေ့ရှိလို့ ဆွေးနွေးပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ မူရင်း အတိုင်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာသာ မပြန်ပေးတော့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ မူရင်းရေးသားချက် များသည်ဖတ်မှတ်ရတာလွယ်ကူပြီး နားလည်လွယ်သောကြောင့်ပါ။သူပြောထားတဲ့ အချက်ကလေးတွေနှင့် အညီလိုက်လုပ်မည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့ windows7ကို အသုံးပြုမည့် ညီအကို မောင်နှမများအတွက် အတော်လေး အဆင်ပြေလွယ်ကူမှုရှိလာပါမည်။ကျွန်တော့်အနေနှင့် အောက်ပါ အကြောင်းအရာကလေးကို သေချာလေးလေ့လာပြီး လိုက်လုပ်စေချင်ပါတယ်ခင်မျာ။ အကျိုးထူးများရလာနိုင်ပါတယ်။
1. Windows7new Taskbar which is the Superbar - Windows7Taskbar now incorporates Quick Launch bar with Show Desktop button moved to the far right end. The Superbar can show launched applications, and even tabs opened in IE (Internet Explorer) plus shortcust to most frequently used items in the system. Right click on the Taskbar will open up the Jump List.
2. Aero Peek - A new feature that allows user to switch windows by just focus or highlight on the thumbnail of mini-window on the Superbar with the mouse. Non-selected windows will fade into transparency.
3.Thumbnails on Windows7Taskbar – The mini thumbnails for opened program windows in Windows7are interactive, and grouped by program where users can click thumbnails in order to accessaspecific opened application or window, to sneak (Aero) peek at the content, to close an item on the desktop, and even to run basic commands such as play and pause for Windows Media Player.
4.Start menu – Search feature has been enhanced, and now taken up the whole Start Menu (unlike only left pane side on Windows Vista). The color of Start Menu can also change to corresponding Windows Aero theme color.
5. Mini Start Menus (Jumplists) - Another new feature is Jump Lists, aka mini Start Menu for each Taskbar items (icons) which allows user to jump directly to the tasks associated with the particular program, without having to access the program directly
6. Overlay Icons and Progress Bars - An icon can now be shown overaprogram’s taskbar button. Furthermore, programs can also give feedback about progress by having their taskbar button turn intoaprogress bar.
7.Action Center – No more Security Center, which is now replaced with Action Center. Action Center notifies users on 10 major Windows functions.
8.Notification Area (System Tray) improvement - Onlyaselect few system icons are shown while all others appear inamenu (high level view lighthouse icon with fly-out menu for most recent notifications) to reduce clutter and noise. Simply drag icons on or off the Taskbar to control the experience. And now every notification balloon tip that appears in the system hasalittle wrench icon that allows one to quickly “swat” an annoying alert by immediately seeing what is causing the notification andadirect way to disable it.
9.Color Hot-track - A light source will track the mouse when user moves the mouse overarunning program on the Taskbar, and the color of the light is actually based on the icon itself.
10.AeroShake - Click and hold with mouse and then shakeawindow to minimize all other windows at once, and shake again to restore all other windows to original position. A mouse gesture improvement.
11. Desktop Slideshow – Commonly known as automatic desktop background wallpaper changer or rotator, allowing users to change or rotate desktop wallpaper (asaslide show) automatically.
12. Gabriola,anew font will be added, with improved font management.
13. Windows Sidebar is been removed, and Windows Gadgets is free (from docking place). Windows Gadgets now can be placed all over the desktop.
14. Improved and smarter UAC - Windows7now containsaslider with four different UAC settings. Any any prompt is now working similarly with other dialog without screen blanking.
15. Windows Ribbon GUI - Windows7graphical user interface will undergo major revamp to make it more attractive, elegant and beautiful. The Office Fluent (Ribbon) interface is been introduced and applied to more Windows application such as Paint and Notepad.
16. New installation process - Simplify installation process with some process automated, and make installation process consumes lesser time.
17. Faster boot up and shutdown time - Windows7should boot up or start up and shutdown faster than Windows Vista byafew seconds in performance.
18. MinWin – MinWin will be included in Windows 7, which isaminimalistic, self-contained set of Windows components. End-user will probably hardly notify MinWin as it does not come in standalone version.
19. Windows7supports over 64 CPU cores or processors and can be scaled up to 256 processors. The 64-bit Windows7kernel supports more than 64 logical processors. However, some applications and Windows kernel-mode components require modification in order to support vast numbers of CPUs.
20. Touch capabilities – Windows7equips withaNatural User interface based on touch and gestures designed to work with the latest hardware technology such as touchscreen LCD panel and mouse.
21. Cloud integration of Windows Essentials – Windows7will no longer come witharange of applications bundled by default into the operating system. Instead, the operating system will reach into the cloud to grab applications such as an email or an instant messaging client.
22. Windows7Driver Verifier - Enhanced driver verification function in Windows7can monitor kernel-mode drivers to detect incorrect function calls or actions that might corrupt the system. Improvements including ability to detect new classes of driver defects, and provide information for debugging these driver defects.
23. Home Groups – Home Groups makes it easier for computers in the same Home Group to share pictures, music, videos, documents and devices.
24. Windows Sensor and Location Platform – Windows7Sensor and Location platform enables computer and applications to know exactly where is the PC located, by using location sensors such as GPS devices, WWAN radios, and even triangulation technology. The ability allows programs to provide more locally relevant content and functionality.
25. Windows7Troubleshooting – Enhanced troubleshooting capabilities which able to resolve issues related to programs, devices, networking, printing, display, sound and performance.
26. Updated Calculator program.
27. Updated Paint and WordPad program with Office 2007-style ribbon that replaces the application menu and toolbars.
28. Windows7Aero Snap for more mouse gesture experience.
29. New Control Panel items such as Accelerators, ClearType Text Tuner, Display Color Calibration Wizard, Gadgets, Infrared, Recovery, Troubleshooting, Workspaces Center, Location and Other Sensors, Credential Manager, Biometric Devices, System Icons, Action Center (Windows Solution Center and Windows Health Center in earlier builds), and Display. 30. New FireWire (IEEE 1394) stack to fully supports IEEE 1394b with S800, S1600 and S3200 data rates.
အကယ်၍ အင်္ဂလိပ်လို အခက်အခဲရှိနေသူများအတွက် ကျွန်တော် မြန်မာလိုပြန်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါမယ် ခင်မျာ။ အားလုံးကိုခင်မင် တတ်သူ တောသားလေး.....................
Last edited by Aung Aung; 03-02-2009 at 04:06 AM.. Reason: editing image links and adding ref link
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ komyo2010 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, မိုးကျော်ခမ်း, ဟိန်းသူအောင်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, ယောနသန်, ဝေဟင်ဦး, godoflove, jinfu, maungwanna, minthumon, smlat88, whiteman
vista နဲ့window 7ရဲ့နှိုင်းယှဉ်ချက်လေးတွေသိချင်ပါတယ်.....................
heardware requirement ကတော်တော်များတယ်နော်.........................................................။
ကို warrior ရေ၊ အောက်ကလင့်မှာလည်း window7အကြောင်း ဆွေးနွေးထားတာတွေရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တခုပြောချင်ပါတယ်။ ဖိုရမ်မှာ နိုင်ငံခြားဆိုဒ်တွေကနေ ကောင်းနိုးရာရာ ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာပို့စ်တွေကို တင်ပေးချင်ရင် အတတ်နိုင်ဆုံး မြန်မာပြန်ပါ။ မပြန်ပေးနိုင်လို့ မူရင်းဆိုဒ်က ကူးမယ်ဆိုရင် အဲ့ဆိုဒ်မှာ ရေးထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကို copy paste လုပ်ပြီး လုံးဝမကူးပါနဲ့။ ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်ရိုက်ပြီးတင်ပေးပါ။ တိုက်ရိုက်ကော်ပီကူးပြီးတင်တာဟာ အဲ့ဝက်ဆိုဒ်တွေမှာ သုံးထားတဲ့ script တွေပါ ဖိုရမ်ကို ပါလာတတ်လို့ ဖိုရမ်မှာ အယ်ရာတက်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် တိုက်ရိုက်ကူးတာမျိုးကို လုံးဝမလုပ်ကြပါနဲ့ ။ ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်လို သူများရေးပြီးသားကို ပြန်ဖော်ပြတာမျိုးဆိုရင် မူရင်းဆိုဒ်လင့်ကို ပို့စ်ရဲ့ အပေါ်ဆုံး(သို့) အောက်ဆုံးမှာ [code] ခံပြီး ဖော်ပြပေးပါ။
ပြီးတော့ သူများဆိုဒ်က ပို့စ်တွေကို ပြန်ဖော်ပြတာမှာ ပုံတွေကို တိုက်ရိုက်ကော်ပီမကူးပါနဲ့။ ကိုယ့်စက်ထဲ အရင် save လုပ်ပြီးမှ free photo-uploading site တခုခုမှာ ပြန်တင်ပြီး ဖိုရမ်ပေါ်တင်ပါ။ သူများဆိုဒ် ဆာဗာမှာ တင်ထားတဲ့ပုံတွေကို တိုက်ရိုက်ကူးတာဟာ သူတို့ bandwidth ကို ခိုးသုံးသလိုပါဘဲ။ ပြီးတော့ အောက်ကပုံလိုမျိုး ဖိုရမ်စာမျက်နှာမှာ မြင်နေရတာလည်း ကြည့်မကောင်းပါဘူး။
ဖိုရမ်မှာ ကိုယ်သိထားတာ ၊ ဖတ်ထားတာတွေကို အများသူငါ ဖတ်နိုင်အောင် ဝေငှပေးတဲ့သူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အပေါ်မှာ ရေးထားတာလေးတွေကို သတိပြုပေးခြင်းဖြင့် ဖိုရမ်ကို ကူညီပေးကြပါခင်ဗျ။
တာတာ, နီထွန်းဦး, မိုးကျော်ခမ်း, ဟန်မိုးလွင်, ဇော်ရဲပိုင်, ဗေဒါလေး, မောင်သံသရာ, ဖြိုးယံလေး, AZM, Blackbrother, crush, godoflove, jinfu, minthumon, peacelover, PyaitSone, smlat88, tu tu, Venom
ကျွန်တော် Window7စမ်းသုံးကြည့်တာ သုံးလို့အရမ်းကို ကောင်းပါတယ် ဆိုတဲ့ စကားထက် ပိုမပြောတတ်တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ(၆)ယောက်သုံးကြတာလဲ အားလုံးက သုံးလို့ကောင်းပါတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်မှာတော့ သိပ်အဆင်မပြေပါ။ သူ့ကွန်ပျူတာ Memory 1G နဲ့ Processor ကရိုးရိုးProcesspr 3GHz ပါ။ ကျွန်တော်တို့ စမ်းသပ်သုံးစွဲကြည့်တဲ့ အတွေ့အကြုံများအရ Window7သုံးမယ်ဆိုရင် Processor က အနည်းဆုံး Dual core နဲ့ Memory ကအနည်းဆုံ 2G ရှိမှ အဆင်ပြေပါတယ်။ Window7beta ရဲ့အားနည်းချက် တစ်ခုက တစ်ချို့ Main board တွေမှာ Audio ပြဿနာ ပေါ်တတ်ပါတယ်။ Realtek HD audio ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်တာ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
မိုးကျော်ခမ်း, မောင်သံသရာ, crush, jinfu
window7နဲ့ပတ်သက်ပြီး လိုအပ်ချက်တွေရှိလာရင် လုပ်ဆောင်ရမဲ့ အချက်လေးတွေကို ဒီမှာ သွားရောက်ဖတ်န်ိုင်ပါတယ်...window7သုံးသူများအတွက် အဆင်ပြေမယ်ထင်လိ်ု့ သွားရောက်ဖတ်စေချင်ပါတယ်...ကျွန်တော်လည်း နားလည်သလောက်ပြန်ရေးပေးပါ့မယ်...
မောင်သံသရာ, အောင်ကျော်သူ, bonge, godoflove
၀င်းဒိုး ၇ တင်နည်းလေသိရင်ရေးပေးကျပါ ကျွှန်တော်သုံးနေတာရက်ပေါင်း ၃၀ ကျော်တာ ခရက်တောင်းနေလို့ပါ သိရင်ပြောပေးကျပါနော်
ကို/မ ချစ်စရာကောင်းသူခင်ဗျာ......အဲဒါက ၀င်းဒိုးတင်ပြီးသွားရင် loader လေး run လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမယ်ထင်ပါတယ်....အောက်ကလင့်လေးမှာ ကိုညီနေမင်း ရှင်းပြထားတာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ.......အောက်ကလင့်မှာသွားဖတ်လိုက်ပါခင်ဗျာ...
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ဆန်းမောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
window7က driver မလိုဘူးဆိုပေမဲ့ ကျွန်တော် စက် Acer aspire 5520 မှာ nvidia geforce 8400 က အလုပ်တော့လုပ်တယ်
ဒါပေမဲ့ ဂိမ်းဆော့လို့တော့မရဘူး။ Dota ရော Titan Quest ရော ပဲ။ အဲဒါ အတွက် လိုအပ်တဲ့ Driver ကို ဒေါင်းလို့ရမယ် နည်းလမ်း
လေးရော လက်ရှိ ဘယ်လိုအဆင်ပြေအောင်သုံးရမလဲဆိုတာလေးကို သိချင်ပါတယ်။ ကူညီကြပါအုံးဗျာ
Find More Posts by ကိုသာပြည့်ဖြိုး
ဂိမ်းဆော့လို့ မရတာက Compatibility Mode ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.... တချို့ ဂိမ်းတွေက XP မှာပဲ ဆော့လို့ရပြီး vista နဲ့7မှာ မရတတ်ပါဘူး.... ဒါပေမယ့် ရအောင်လုပ်တဲ့ နည်းလမ်းလေးကို ဒီလင့် မှာ ဆွေးနွေးထားပါတယ်.... Control Panel -->Program -->Program and Features အောက်မှာ Run Programs made for previous version of Windows ထဲကနေဆက်သွားပြီးတော့ ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာ အလိုက် ပြင်လို့ရပါတယ် ခင်မျာ...
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ မင်းသီဟထွန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသာပြည့်ဖြိုး, ဆန်းမောင်, မိုးကျော်ခမ်း, ရုပ်ဆိုး, မောင်သံသရာ, crush
Find More Posts by အာကာလေး
Windows7က Vista ထက် Hardware Requriment သိပ်မယူပါ... Vista ကို နည်းနည်း Modify လုပ်ထားတာပါ... အပေါ်က ကို warrior ပြောထားတာ လွဲနေလို့ပါ .. ကျနော် ခုလက်ရှိ Windows7သုံးနေတာ ..
Memory က 512 ဆို လောက်ပါတယ် ...
HDD ကတော့ သိပ်မလိုပါ (max : 6GB) ဆိုလောက်ပါတယ် <ခုနောက်ပိုင်း HDD တွေက 250 GB လောက်က အနည်းဆုံးဆိုတော့ သိပ်ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာမလို
နောက်တစ်ခုက Format ချရတာ ကျန်တဲ့ Windows တွေနဲ့မတူ .. အလွန်ကို မြန်ပါတယ်..
Driver အနေနဲ့ Sound Driver က Built in ပါပြီးသား (Additional Driver ကတော့ သက်ဆိုင်ရာ model နဲ့ update လုပ်လို့ရပါတယ် )
ကျန်တာကတော့ အပေါ်က အစ်ကိုတွေ ပြောသလိုပေါ့
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ lynndragon အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, မိုးကျော်ခမ်း, မောင်သံသရာ, crush, downsein
Find More Posts by lynndragon
window7အတွက် လိုအပ်တဲ့ Windows7system requirements ပါ..
Windows7Compatibility Center (၀င်းဒိုး7အတွက် ဘယ်ဆော့ဝဲလ် တွေနဲ့ အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာ)
မိုးကျော်ခမ်း, မောင်သံသရာ, maungwanna, minthike, PyaitSone
16-11-2009, 11:20 AM
Windows7တင်ပြီးမှ Partition ကို အလွယ်တကူ ပိုင်းနိုင်ဖို့အတွက်ပါ။
Windows7ကို တင်ပြီးသုံးကြတဲ့သူတွေက တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ ချီးကျူး ကြလို့ ကျွန်တော်လဲ စိတ်ဝင်စားပြီး
ကျွန်တော့ ကွန်ပြူတာမှာ Windows7တင်လိုက်တယ် Windows တင်မယ့်အပိုင်းကို 20G ထားပြီးတင်လိုက်တာပေါ့ တကယ်လဲ Windows တင်ပြီးသွားရော 15.5G အသုံးပြုသွားတယ်တဲ့ ဒါနဲ့ Windows တင်တဲ့အပိုင်းကို Free Space 10G လောက်ထားချင်တာနဲ့ Partition ကို အလွယ်တကူပိုင်းလို့ရတဲ့
Softwares တွေကို အင်တာနက်မှာ လိုက်ရှာကြည့်တော့ Windows7နဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ Software လေးတစ်ခုတွေတယ် Easeus Partition Master Home Edition ဆိုတဲ့ Software လေးပါ အဲဒါလေးကိုအသုံးပြုပြီး Partition ပိုင်းလိုက်တာ အလွယ်တကူဘဲ ပိုင်းလို့ရတာနဲ့ မြန်မာမိသားစုက သူငယ်ချင်းတွေကိုဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
Software ကိုဒေါင်းလုပ်ယူဖို့အတွက် တင်ပေးချင်ပေမယ့်လဲ အင်တာနက်ကော်နရှင် အလွန်နှေးနေတာကြောင့်ဒေါင်းလုပ်ချလို့ရမယ့် လင့်ကိုကူးယူဖေၞပြလိုက်ပါတယ် အားလုံးဘဲ နားလယ် သီးခံခွင့်လွှတ်ပေးကြဖို့တောင်းပန်တယ်။
တကယ်တော့ ပုံတွေနဲ့ Software ကို အပ်လုဒ် မတင်တတ်လို့ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ maungwanna အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, မိုးကျော်ခမ်း, မောင်သံသရာ, အောင်ဗလ, minthike, PyaitSone, tu tu
အသင်းသားတွေဆွေးနွေး ထားတာလေးတွေ ကိုဖတ်ရတာနဲ့တင် တော်တော်ဗဟုသုတရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
Find More Posts by tinoohlaing
တင်ပြချက်၊ ဆွေးနွေးချက်များကို ဖတ်ရတာ အတော်ဗဟုသုတရပါတယ်။ အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ venvimala အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by venvimala
window7မှာ Game တွေဆော့လို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်
အထူးသဖြင့် dota ထည်ပြီးဆော့ချင်တာ window NT not support ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘယ်လိုကြောင့်ဆိုတာ ဖြေကြားပေးပါဦးခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ မောင်စိုးပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, မောင်သံသရာ, crush, g00gle, Lwin Thu
Find More Posts by မောင်စိုးပိုင်
ကျနော w7 starter ကို သုံးပါတယ်။ အသံမထွက် ဘူဖြစ်နေတယ်။။။။ pls helpe me ............. thank q
Find More Posts by lalthlamuanpuia
ကျွန်တော့်ဆီမှာ window is not genuine ဆိုပြီး black screen ကြီးပဲ ပေါ်နေပါတယ် .. အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ရှင်းပြပါဦး .... အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် window7တင်ထားတာပါ
Last edited by kwisi; 25-10-2011 at 02:01 PM..
ကျွန်တော့်ဆီမှာ window is not genuine ဆိုပြီး black screen ကြီးပဲ ပေါ်နေပါတယ် .. အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ရှင်းပြပါဦး .... အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် window7တင်ထားတာပါ
အောက်ကပိုစ့်လေးတွေမှာ သွားကြည့်လိုက်ပါအစ်ကို။ အဲဒီမှာ Windows Loader တို့ Remove WAT တို့ဆိုတာတွေ တင်ပေးထားကြပါတယ်။ အဲဒါတွေကို အသုံးပြုပြီး ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုစ့်လေးတွေကို သေချာတော့ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။
window7မှာ restart ကနေပြန်တက်လာ ၇င် destop ပြောက်သွားပြီး အနက်ရောင် Desktop ပဲ ပေါ်လာလို့
windows7ပြန်မတက်တော့လို့ပါ
စနိုးလေး, မိုးကျော်ခမ်း, မောင်သံသရာ, မြန်အောင်သား, arkaraung, crush, g00gle, tu tu, zo
အကို ကျနော်စက်မှာ ၀င်ဒို7တင်းထားတာ အဲဒါ လေး နေ လို့ မ လေး အောင် လို့ ဘယ် လိုပ် ရ သလည်း နောက်ပြီတော့ ၀င်ဒို7နဲ့ ပတ်သက်ပြီ မလေး အောင် လို့ ရှင်းပြတယ် စာအုပ် ရှိရင် လည်း mediafire လေး နဲ့ တင်းပေးပါ အကို ကျနော် ရှင်းပြ ပါ ဦး အကို အားကိုပါတယ် ကျေးဇူးပါ
ကိုညီနေမင်းဆိုဒ်ကယူလာတဲ.ှဆ၇ာအောင်လင်းေ၇းတဲ. Windows7အသုံးပြုနည်း လက်စွဲ ဆိုတဲ. စာအုပ်လေး ဖတ်ကြည်.ပါလား။ အစ်ကို သိချင်တာလေးတွေလဲ သိ၇တာပေါ.။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ putty အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, bagothar85, g00gle, smlat88
22-01-2012, 11:29 AM
အကို ကျနော်ကို desktop ပေါ်မှာ photo background ပုံ ကို ကိုယ်က စိတ်ကြိုက် 10 ပုံ လုပ်ထား ရင် အဲဒီါ 10 ပုံက slidshow ဖြစ်နေအောင် ဘယ် လုပ် ရ လည်း လုပ်တယ် နည်းလေးကို ပြောပြါ ပါဦး အားကိုပါတယ် အကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြည့်ပါ Window7ဆိုရင်တော့ Desktop> R-click> Personalization> Desktop Background > Picture location ရဲ့ Browse မှာ ကိုယ်ပုံထည့်ချင်တဲ့ ဖိုဒါထဲက ပုံတွေကိုထည့်ပါ
ပြီးရင် Picture position မှာက Fill ကိုထားပါ Change picture every မှာတော့ ကိုယ်တစ်ပုံနဲ့ တစ်ပုံ အချိန်းရဲ့ အချိန်ကို ကြိုသလောက်ထားနိုင်ပါတယ် အနည်းဆုံးတော့ ဆလိုက်ရှိုးဆိုရင်တော့ ၃၀ Seconds လောက်ထားပါ Shuffle မှာ အမှန်ခြစ်ဖြည့်ပေးပါ ပြီးရင် Save Changes ကိုနှိပ်ပါ။ လုပ်ထားတာတွေကိုပိတ်လိုက်ပါ အဲ့ဒါဆိုရင် ခုနက ထည့်ထားပုံတွေဟာ ဆလိုက်ရှိုးလိုမျိုးတစ်ပုံခြင်းပြောင်းနေမှာပါ Window7နဲ့ Vista မှာပဲရပါတယ်။
$ညိုမင်းလွင်$, minthike, putty
ဘော်ဒါ တို့ ကျနော်ကို ကူညီပါဦးနော် ကျနော်စက်မှာ windown7တင်ထား တာ လေး အဲဒါကို မ လေး အောင် လို့ နောက်ပြီတော့
window7မှာ ကျနော်က software ကို အင်စတော့ လုပ်ထား တာ အဲဒါ ကို ကျနော် မသုံး ဖြစ်လို့ unistall လုပ်တာ ကို စက်ထဲ မှာ ကျန် တာ အခါ မှာလည်း ရှိနိုင်တယ် နောက်ပြီတော့ harddisk scan ဖတ် နည်း တို့ defrag လုပ်နည်း တို့ registry error check လုပ်နည်း တို့ Ccleaner သုံးနည်း တို့ ပါတယ် စာအုပ်လေးကို ကျနော် ကို window7နဲ့ ပတ်သက်တယ် စာအုပ်ကို mediafire လေး နဲ့ တင်းပေးပါ အကို အပ်ါက တင်ပေးတယ် စာအုပ် က ပါတော့ ပါတယ် သိပ် မစုံ လို့ စုံ တယ် စာအုပ် လေး တင်ေးပးပါ နော် အားကိုပါတယ် mediafire လေး နဲ့ တင်းပေးပါ နော် အားကိုပါတယ် ကျေူးဇူးတင်ပါတယ်
အောက်က လင့်ကတော့ youtube မှာ Ccleaner အသုံးပြုနည်းလေးရယ် install လုပ်နည်းလေးရယ်တွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ ဗွီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ဆိုတော့ ပိုပြီးတော့လဲ နားလည်လွယ်တာပေါ့
နောက်ထပ် လင့်လေးကတော့ hard drive ကို defragment လုပ်နည်းလေးပါ
Window7အသုံးပြုတာလေးနေတယ်ဆိုရင် အောက်ကပို့စ်လေးမှာ ကိုဆန်းမောင် ဆွေးနွေထားတာလေး ရှိပါတယ်
ကျနော်လဲ လက်လှမ်းမှီသလောက်ရှာပြီး ဆွေးနွေးလိုက်တာပါခင်ဗျာ...အကိုပြောသလို စာအုပ်လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ ဖတ်ရတာလဲ အဆင်ပြေပါတယ် တစုတစည်းထဲလဲ ရှိတာပေါ့ဗျာ...အဆင်ပြေပါစေ ...ငါမှား တာရှိရင်တောင်းပန်ပါတယ်(အောင်လသီချင်းပြောတာပါ)
$ညိုမင်းလွင်$, တာတာ, မောင်ပေါ်ဦး, minthike
About MYANMAR version window ... Tha Toe Naung® Windows နှင့်သက်ဆိုင်သော 15 12-02-2010 01:50 PM